St. Vincent sy ny Grenadines dia nitatitra ny fiakaran'ny 7.1% ny fahatongavan'ireo mpizahatany
Home » Toerana fitsangatsanganana » St. Vincent sy ny Grenadines dia nitatitra ny fiakaran'ny 7.1% ny fahatongavan'ireo mpizahatany
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika an'i St.Vincent sy ny Grenadines nandritra ny dimy (5) volana voalohany tamin'ny 2019 dia nitombo 7.1%. Ny tarehimarika vonjimaika amin'ny vanim-potoana Janoary ka hatramin'ny Mey dia nampiseho fa mpitsidika 232, 916 no tonga tao St.Vincent sy Grenadines nandritra ny taona hatreto, raha ampitahaina amin'ny 217,453 2018 tamin'ny taona 15,463. Ity dia taratry ny mpitsidika XNUMX fanampiny ho any amin'ny toerana haleha.
Ny fahatongavana an-habakabaka koa dia nitombo 7.1% tamin'ny totalin'ny 36,757 tamin'ny taona 2019 raha 34,335 tamin'ny taona 2018 na ny tsy fitovian'ny mpitsidika mijanona 2,486. Ny tsena kanadiana dia nisoratra anarana ny fiakarana lehibe indrindra amin'ny fahatongavan'ireo mpitsangatsangana miaraka amin'ny fiakarana 16.9% raha ny tsenan'i Etazonia kosa dia nitombo 11.4% narahin'ny tsena UK niaraka tamin'ny fitomboana 10%.
Ny fahatongavan'ireo yacht dia nitombo 7.6% nandritra ny volana Janoary ka hatramin'ny Mey niaraka tamin'ny mpitsidika yacht 37,926 nandritra ny dimy volana tamin'ny taona 2019 raha 35,240 tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2018. Nisy mpitsidika fitsangantsanganana 158,233 tonga tany amin'ny toerana halehany ho an'ny vanim-potoana mitovy amin'ny fisoratana anarana 7.0% amin'ny mpitsidika fitsangantsanganana 147,878 ho an'ny vanim-potoana fampitahana amin'ny taona 2018.
Hatramin'ny nanokafana ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Argyle tamin'ny volana feb 2017 dia mpitatitra iraisam-pirenena telo no niasa tsy an-kijanona nankany amin'ny toerana haleha isan-kerinandro. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, ny American Airlines dia nanambara ny sidina faharoa isan-kerinandro mankany AIA manomboka ny volana desambra 2019 rehefa hiasa ny serivisy asabotsy izao miaraka amin'ny serivisy alarobia. Ny serivisy fitsaharana tsy miato an'ny American Airline mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Argyle dia hameno ny serivisy tsy an-kiato ataon'ny Caribbean Airlines isaky ny Alarobia tsy miato avy amin'ny JFK International, USA ary ny serivisy fijanonana isan-kerinandro ataon'ny Air Canada Rouge isan-kerinandro avy any Pearson International, Canada. Air Canada Rouge indray dia hiasa serivisy tsy an-kijanona isan-kerinandro amin'ny alahady manomboka amin'ny 15 Desambra 2019.
Nandefa ivontoerana Global SUNx momba ny dia an-tsehatra momba ny toetrandro i Malta
Fanambarana IATA momba ny ady amin'ny fiarovana an'i Boeing 737 MAX